About Us - UJinan Lide Rubber & Plastic Co, Ltd.
UJinan Lide Rubber & Plastic Co.Ltd.itholakala ePingyin Yushan Industrial Park yesifundazwe sase Shandong.Mountain Tai isempumalanga yale nkampani, kanti eningizimu yidolobha laseConfucius.JinanLide yasungulwa ngonyaka ka-2013, amabhizinisi ayo asemqoka akhiqiza, enza imishini nokumaketha ngemikhiqizo yepulasitiki nenjoloba. Manje, inkampani isungule uchungechunge olu-9 ngemikhiqizo engaphezu kwe-100, esetshenziswa kabanzi emikhakheni ehlukene.
Ijubane lokucwaninga imikhiqizo emisha yenkampani yethu lishesha kakhulu, ngoba sinabaklami abangochwepheshe be-3D abachwepheshe abakhethekile. Sithenge imishini yokubumba ethile ye-CNC, kuthatha izinsuku ezingama-5 ukulungela isikhunta, futhi kuthatha izinsuku eziyi-10 ukuthi amasampula alungele.Izinkampani zethu zingakhiqiza amalunga enjoloba wokunwebeka futhi zenze nemikhiqizo emisha ye-OEM ngokuya ngezidingo abathengi.
Le nkampani inamathuluzi okuhlola aphelele, njenge-rotorless curometer, umshini wokuhlola ukunyakaza we-axial ne-lateral, umhloli we-angular ukunyakaza, umhloli we-vacuum, umshini we-abrasion, umshini wokuhlola we-elekthronikhi we-elekthronikhi, i-oveni yokuguga eshisayo, umhloli we-rub-rebound, uShore Durometer, uCompression Compression Isilungiso Sokuguqulwa Kwombuso njll.
Njengamanje, sine-CE, imvume yama-Wras kanye nesitifiketi se-ISO9001. Sizoqhubeka nokuhlela ukuvunywa okusha ngokwezidingo zezimakethe.
Kusukela isisekelo senkampani, siphokophela kwinqubomgomo ehlala kwikhwalithi nentuthuko ethembele kudumela elihle lemakethe. Le nkampani ithola isethi ephelele yemishini yokukhiqiza kanye nokuhlola, futhi inkampani ibuye igxile ku-technicis, ukuqeqeshwa kanye nezinto ezintsha.
Ngakho-ke, inkampani isungule uhlelo lokulawula ikhwalithi ephezulu nekhwalithi yokuthengisa imikhiqizo. Impahla ekhiqizwayo isuselwe kumazinga kazwelonke nakwamanye amazwe.Manje izimpahla zethu zithunyelwa emazweni angaphezu kwangama-20 emhlabeni, njenge Us, Colombia, HongKong, Singapore, Vietnam, Turkey, Thailand, Algeria, Egypt, Italy , njll. Izimpahla zethu zithola idumela elihle kumakhasimende asekhaya nakwamanye amazwe.